Ny Caribbean Airlines izao dia mitaky mpandeha hitafy saron-tava
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny Caribbean Airlines izao dia mitaky mpandeha hitafy saron-tava
Caribbean Airlines dia manolo-tena amin'ny fiarovana ny fiarovana sy ny fiadanan'ireo mpanjifantsika sy ny mpiasanay ho valin'ny Covid-19 areti-mifindra.
Ny Caribbean Airlines izao dia mitaky ny mpanjifa rehetra mba hisaron-tava / manarona mandritra ny diany manontolo amin'ny teboka mikasika ny Caribbean Airlines rehetra manomboka amin'ny fidirana amin'ny seranam-piaramanidina, faritra misy vavahady fiaingana, tetezana jet ary ny fiaramanidina mandritra ny fotoana maharitra sidina.
Tsy maintsy atao izany fepetra izany. Ny fandavana ny fanarahana, dia hiteraka ny fandavana ny fandehanan'ny zotram-piaramanidina; afa-tsy amin'ny zaza latsaky ny 2 taona, na olon-dehibe izay manana aretina izay manakana azy ireo tsy hampiasa sarontava.
Ny fanavotana manokana dia mila ankatoavin'ny mpitsabo ary neken'ny Caribbean Airlines alohan'ny dia.
India dia mikendry ny hampivelatra ny fizahan-tany momba ny sarimihetsika sy ny fahasalamana
Ireo mpandray anjara amin'ny fizahantany ao Tobago dia miara-miasa hanamafisana ny fiarovana ny toerana itodiana